Fanavaozana lalana eto Iarivo Misy petatoko sy tsy manara-penitra
Fifamoivoizana sy fihibohana Nitondra fanintsiana ny Minisitry ny atitany
Miteraka adihevitra ny fepetra sasany amin’ny fanapahan-kevitry ny fanjakana manoloana ny hamehana ara-pahasalamana.
Mpitandro filaminana sasany Mbola misy manao fanaparam-pahefana ihany
Miary Rasolofoarijaona, mikasika ny zava-nihatra taminy tetsy amin’ny Leader Price Andranomena omaly.
Manomboka vitavita ireo lalana sasany eto Antananarivo mifanohy amin’ireo làlam-pirenena mivoaka ny renivohitra.
Misy orinasa maromaro nahazo ny tsenan’asa, ka misy ny manao ny asany araka ny tokony ho izy, fa miharihary ihany koa ny petatoko sy tsy fanarahana ny fenitra. Hahatarafana an’izany ny zava-misy amin’ny làlana ataon’ny Sinoa amin’iny Soanierana ampitan’ny gara iny. Zara raha vita, ary hita miharihary ny haratsin’ny asa satria toa tahaka ny « bombon voanjo » izay tokony mbola ampiana “dernière couche”, ohatra, saingy efa mijanona amin’izao raha ny fanadihadiana natao. Raha ny resaky ny olona teny amin’ny manodidina, izay nanontaniana momba ny fahitany ny kalitaon’ny asa aza, dia toa ny mpanara-maso avy amin’ny minisiteran’ny Asa vaventy indray no nahazo loza nafindra toerana rahefa nanakiana izany. Ireny tokoa ve no nifanarahana tamin’ny mpamatsy vola sa misy fanodinkodinam-bola mandeha, ka akora tsy ampy no ampiasaina ? Tsy haharitra mihitsy ny fotodrafitrasa petatoko tahaka izany, ka mila hentitra sy manara-maso ny mpitondra. Mampahatsiahy ilay filoha tany aloha hoe: nasainy nohepahina ny asa efa vita ary naverina natao, toy ny tamin’iny làlana mihazo an’i Miandrivazo sy Morondava iny satria tsy arakaraka ny nifanarahana. Lojika raha naharitra tokoa ny asa tamin’izany, toa iny By Pass iny, izay efa 15 taona izao fa tsy ahitana fahasimbana kanefa ny làlana nataon’ny sinoa etsy Tsarasaotra-Ivato vao roa taona, dia efa potika noho ny haratsin’ny kalitao satria nisy volabe voahodinkodina tao, raha ny loharanom-baovao.